Zvepamutemo zviripo Ubuntu 16.10 | Linux Vakapindwa muropa
Isu tatova muna Gumiguru uye iwe unotoziva kuti zvinorevei, izvo vhezheni itsva yeUbuntu yasvikaIyo ndiyo Ubuntu 16.10 vhezheni, iyo yatove neiyo 4.8.1 Kernel inosanganisirwa mukati mayo.
Iyi vhezheni yakave neyakajairwa 6-mwedzi kuvandudza, pasina kunonoka mukusimudzira, nekuti hapana chakajairika chakaitika chinoramba kuvhurwa kwakafanana.
Ubuntu 16.10 zviri pachena haina akawanda akawanda maficha senge yapfuura vhezheni 16.04 LTS, sezvo mumwedzi mitanhatu chete tichava neUbuntu hutsva. Pakati pezvinhu zvinozivikanwa zvikuru, tine kuiswa kwezvichangobva kuburitswa Kernel 4.8 mushanduro yayo 4.8.1 (iyo 4.8 yakanga iine bug). Uye zvakare, zvirongwa zvakaita seLibreOffice uye Mozilla Firefox zvakagadziridzwa kune dzazvino shanduro dzakagadzikana
Chinonyanya kushamisa kusanganisa kwe vhezheni yekuyedza yeUnited 8, desktop inovimbisa kusvika kune inotarisirwa kusangana yemidziyo. Semuenzaniso, inosanganisira maficha anoshanda kune ese mafoni mbozhanhare uye makomputa, ayo anoyera zvichienderana nechiratidziro chavari kushandisa uye chinoshanduka kubva mbeva kubata sikirini zvichienderana nechigadzirwa.
Uye zvakare, Kubatana 7 kwakagadziridzwa, iyo ichiri iyo default desktop. Vashandisi pIwe unozogona kusarudza pakati pekuyedza Kubatana 8 uye Kubatana 7 pachiratidziro chekupinda. Nezve izvo zvimwe zvinhu zvitsva, bugs dzakaonekwa mune RC vhezheni dzakagadziriswa uye iyo Gnome 3.20 uye Gnome 3.22 mapakeji akagadziridzwa sezvakakosha zvinhu zvitsva.
Rutsigiro rweiyi inoshanda system inogara kwemwedzi mipfumbamwe senguva dzose, kupera kwekutsigirwa pakutanga kwegore 2017. Neichi chikonzero, kana iwe uri mushandisi anoda rutsigiro rurefu-refu, ini ndinokupa zano kuti uise vhezheni 16.04 LTS, ine rutsigiro rurefu uye rwakatsiga.
Senguva dzose, unogona kurodha Ubuntu 16.10 pane iyo webhusaiti yepamutemo yesaitikana, kugona Sarudza pakati peshanduro dzese inowanikwa uye zvakare kurodha yapfuura shanduro senge dzambotaurwa 16.04 LTS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Zvepamutemo zviripo Ubuntu 16.10
Victor Hoffman (@terabi) akadaro
Chinhu chega chandingade kuona chichibuda munguva pfupi ndeye kutsigira yangu amd Radeon r7 yakateedzana kadhi Nekuti parizvino ini ndakasarudza kushandisa mint pane Ubuntu kune graphical yekushandisa nyaya.
Pindura kuna Victor Hoffman (@terabi)